Ingaba ndingamkela ingqalelo yakho nceda? Ukuba uFreddie Murphy usekwakha, nceda uze emnyango wangaphambili. Umkakho uyazi ukuba ulapha. Phinda, uFreddie Murphy umfazi wakho ulapha. Nceda uphume kwisakhiwo ... uyabhuqwa! (kuveliswe) - Ukubala kwe-NYE ku-Djs, Vjs, ii-nightclub 2019
SKU: DJ DROPS 70 - #1 Udidi: DJ Drops